vendredi, 07 août 2020 21:59
Coronavirus: Mihoatra ny 2 tapitrisa ny mitondra tsimok’aretina any Inde
2 tapitrisa amin’ireo mponina manodidina ny 1,353 lavitrisa any Inde ankehitriny no voamarina fa voan’ny Covid-19.
vendredi, 07 août 2020 21:29
Covid-19: 2 000 mahery no matiny tao anatin’ny 24ora tany Etazonia
2 060 ny maty, 58 000 ny tranga vaovao Covid-19 tao anatin’ny 24ora tany Etazonia. Tany amin’ny volana mey 2020 no nisy tranga toy izao, nidangana maherin’ny 2 000 ireo namoy ainy tao anatin’ny iray andro tany an-toerana.
vendredi, 07 août 2020 15:08
DRENETP Betsiboka: Hiverina an-tsekoly ireo mpianatra amin'ny kilasim-panadinana
Hiverina an-tsekoly ny tompon'andraikitra sy ny mpianatra amin'ny kilasim-panadinana, na sekoly miankina na tsy miankina, manerana ny Faritra Betsiboka manomboka ny Alatsinainy 10 Aogositra 2020. Fanapahan-kevitra noraisina teo anivon’ny CRCO Betsiboka (Centre Régional de Commandement Opérationnel) io taorian’ny fiaraha-midinika mba ahafahan'ireo mpianatra manatontosa ny famerenana hiatrehana ny fanadinam-panjakana ôfisialy. Tsy maintsy hajaina arak’izany ireo “gestes barrières” rehetra ho fiarovana amin’ny fiparitahan’ny valan’aretina.
jeudi, 06 août 2020 14:30
Covid-19: Nomena fanalefahan-ketra ireo fitaovam-piarovana isan-karazany
Nomena fanalefahan-ketra manokana ny fanafarana sy fampidirana entana ho enti-miady amin’ny Covid-19 mikasika ireo entana tonga avy any ivelany toy ny « concentrateurs d’oxygène », ny « respirateurs », ireo « kits de prélèvement », ireo « kits de laboratoire », ireo fitaovam-piarovana isan-karazany.
jeudi, 06 août 2020 14:25
Jirama: Ny halatra jiro sy/na rano ihany no iharan'ny fanapahana amin'izao
Nanao fanambarana ny avy eo anivon’ny Jirama fa ny halatra jiro sy/na rano ihany no iharan'ny fanapahana amin'izao vanim-potoanan'ny fahamehana ara-pahasalamana izao. Misy anefa no manararaotra izany, ka fantatra izao araka ny fampitam-baovao nataon’ny Jirama hatrany fa misy andian'olona mitonona ho mpiasan'ny Jirama mitety tokantrano mitsirika kaontera amin'izao fotoana izao. Milaza ireo andian'olona ireo fa « misy hosoka ny kaonteran'ilay mpanjifa ka tsy maintsy esorina hanaovana fanadihadiana, raha tsy manome vola azy ireo ny tompontrano », hoy ny fanambarana. Miantso ny mpanjifa ho mailo ny Jirama manoloana izany tranga izany, ary hitaky amin'izy ireny ny "Badge" manamarina fa tena mpiasan'ny Jirama ilay olona, "Ordre de mission" maniraka azy hanatanteraka ny asany miaraka amin'ny Kara-panondrom-pirenena.
lundi, 03 août 2020 21:37
Mahajanga: Anatin’ireo faritany telo tena maro olona voan’ny Covid-19
Anatin’ireo faritany telo izay tena maro olona mitondra ny otrikaretina Covid-19 i Mahajanga. Ho an’ny faritra Boeny manokana dia 210 no isan’ireo hitan’ny fitiliana fa mitondra ny otrikaretina ankehitriny. 111 amin’izy ireo mitsabo tena any an-tokantrano ary ny 22 kosa dia eny amin’ireo hopitaly voatokana amin’izany. Misy ireo marary ahiahiana ihany koa no efa tsaboina eny amin’ny hopitaly na dia tsy mbola nahavitana fitilina, kanefa maneho ireo fambaran’ilay aretina. Olana amin’ny tsy ahafahana mifehy ny valan’aretina araka ny tatitra nandritra ny fivorian’ny CRCO Boeny androany, dia ny tsy fihibohan’ireo olona efa voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina. Mbola misy hatrany ny fivorivoriana eny anelankelan’ny Fokontany, ary tsy manao aro-vava sy orona rehefa tsy mahita ireo mpitandro filaminana.
lundi, 03 août 2020 21:36
Gasypatriote: Miampy namana mpanao gazety sady mpandalina
Tongasoa ny namana Balita, hitondra amintsika ireo vaovao misongadina, ary hanao fandalinana ara-politika, sosialy ary ara-toekarena amintsika. I Balita dia mpanao gazety mana-pahaizana ambony momba ny fandalinana fiaraha-monina. Raha ny fomba fijeriny dia mitaiza sy manabe olom-pirenena amin'ny alalan'ny vaovao marina sy mitombona no tanjony. Ny eto amin'ny Gasypatriote moa dia fenitra napetraka ny fahalalahan'ny mpanao gazety amin'ny fomba fijery maro loko ahafahan'ny rehetra mandalina sy manao ny safidy fandalinana avy eo. Tsy misy teritery na lohahevitra fady, ankoatran'ny fifanajana sy ny fahamarinan'ny vaovao ary fanajana ny fenitra maha mpanao gazety. Hijanona tsy ambaratelo ny momba azy, fa hitatsika miandalana eny ihany ny sangan'asan'i Balita. Mirary soa e.Patrick
lundi, 03 août 2020 12:38
Hetsika « Sosialim-bahoaka » : Mitohy ny fizarana tohana ara-tsakafo ho an’ireo fianakaviana sahirana
ANS Ampefiloha, CRC Tsiadana, CEG Ambohimiandra, EPP Vohibola, EPP Antanimena, Kianja Angarangarana, Coliseum Antsonjombe, Andranomena no anisany toerana anohizana ny hetsika « Sosialim-bahoaka » izarana tohana ara-tsakafo ho an’ireo fianakaviana sahirana hiatrehana ny hamehana ara-pahasalamana. Fianakaviana miisa 1 200 avy no hisitraka izany ao amin’ny Boriborintany Voalohany, Faharoa, Fahatelo, Fahaefatra ary fahaenina ; 1800 kosa ny ao amin’ny Boriborintany Fahadimy. Natomboka teo amin’ny Kianja Malacam tamin’ny sabotsy 1 aogositra moa ity hetsika « Sosialim-bahoaka » ity.
lundi, 03 août 2020 11:47
Mahabo Menabe: Tonga ny Vatsy Tsinjo
Ny 31 jolay teo no nizarana ny Vatsy Tsinjo teto Mahabo Menabe. Tamin’ny 7ora maraina dia efa raikitra ny filaharana, ny sasany efa tamin’ny 2ora tolakandro vao nahazo ny anjarany. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 02 août 2020 13:05
Fihaonana – Tsiroanomandidy: Jiolahy mitam-basy iray maty voatifitra
Tokantrano iray tao Bekapika Fokontany Amparihibe, Kaominina Fihaonana, Distrika Tsiroanomandidy notafihin’ny jiolahy mitam-basy. Tafatsoaka anefa ny tompontrano, ka afaka niantso vonjy. Nifanome tanana ny Fokonolona nampian’ny Zandary nanenjika ireo jiolahy. Voasambotra ny iray, tafatsoaka kosa ny roa. Teny an-dalana hanoro ny toerana misy ireo roalahy nitsoaka ilay jiolahy voasambotra no nanararaotra nitsoaka tao anaty haizina sy oran’andro. Nanapoaka basy ny Zandary hampijanonana azy saingy nanao anjolofo ilay jiolahy ka maty voatifitra. Raindahiny amin’ny halatr’omby sy vaky trano ity farany.
Page 10 sur 591